भागबन्डामै अल्झियो सरकार परिवर्तन - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home राजनीति भागबन्डामै अल्झियो सरकार परिवर्तन
लस एन्जलस् । विश्वभर फैलिरहेको कोरोना भाईरसको सँक्रमण अमेरिकामा पनि तिब्र गतीमा फैलिरहेको छ । यसै क्रममा कोरोना भाइरसबाट सँक्रमित हलिउड स्टार...
ललितपुर । यातायात क्षेत्रको विद्यमान समस्या समाधान गर्नका लागि निर्माण गरिएको कार्यदलले आज बिहान नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग...
जनकपुरधाम, २९ फागुन । अपहरणमा परेकी धनुषाकी एक १४ वर्षिया युवतीलाई प्रहरीले आज उद्दार गरेको छ । धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका वडा नं. ५...
समाज रासस - July 19, 2020
काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष श्रावण कृष्ण चतुदर्शीका दिन मनाइने गठामङ्गल अर्थात् घण्टाकर्ण पर्व आज राजधानीको भित्री शहरमा मनाइँदैछ । चाडपर्वमध्ये सबैभन्दा जेठो मानिएको गठामङ्गल...
काठमाडौं । उपत्यकाका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा कालोबजारी, नाफाखोरी र जम्माखोरीविरुद्ध प्रशासनले आक्रामक कारबाही थाल्ने भएको छ । महाविपत्तिको समयमा कालोबजारी बढ्न...
अर्थ भगीरथ भण्डारी - October 5, 2020
इलाम । इलाम र पाँचथरको संगमस्थलमा रहेको फिदिम नगरपालिका १४ सुकेपोखरीकी अस्मिता वान्तावा राईले तरकारी खेतीबाटै चार जनाको परिवार चलाएकी छन । चार महिनामा...
Exclusive ईश्वर तामाङ - August 11, 2020
यो पनि पढ्नुहोस नेकपा नेता भन्छन्, सरकार दायित्वबाट भाग्न मिल्दैन